एनआरएनको गोप्य सदस्य विवरण छरपष्ट (रेडियो अन्तरबार्ता सहित) | himalayakhabar.com
एनआरएनको गोप्य सदस्य विवरण छरपष्ट (रेडियो अन्तरबार्ता सहित)
इमेल र फोन दुरूपयोग गर्दै उम्मेदवारहरू भोट माग्दै
- भीषण न्यौपाने | 17th May 2019, Friday | २०७६ जेष्ठ ३, शुक्रबार १०:००
टेक्सस(अमेरिका) – अन्ततः जे डर होला भनेर अमेरिकामा रहेका धेरै नेपालीहरूले सदस्यताका लागि चासो दिएनन् त्यो भइ छाडेको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरिकाको सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू अहिले छरपष्ट भएका छन् । वर्तमान अध्यक्ष डा. केशव पौडेल, विघटित भेरिफिकेसन समितिका पदाधिकारी, सुपरभिजन समितिका सदस्यहरू, निर्वाचन समितिसँग मात्र पहुँच रहने ९ हजार सदस्यहरूको १० महले विवरण सहितको सूचि अहिले बाहिरिएको छ ।
असाध्यै संवेदनशील र गोप्य रहनुपर्ने यो सूचि कसरी बाहिरियो भन्नेमा अहिले एकले अर्कालाइ दोषी करार गर्न सबैजना तल्लिन छन् ।
हिमालयखबरलाइ एकजना शुभचिन्तक पाठकले स्रोत नखोलिदिन आग्रह गर्दै सदस्यहरूको सूचि पठाएका छन् । उनले अाफूलाइ पनि कसैले त्यो सूचि दिएको उल्लेख गर्दै त्यो सूचि धेरैको हातमा पुगेको समेत जानकारी दिए ।
यो सूचि उम्मेदवारहरूको हातहातमा पुगेको छ । यही सूचिमा भएको इमेल आइडी, मोबाइल नम्बरको दुरूपयोग गर्दै उम्मेदवारहरूले भोट मागिरहेका छन् ।
विघटित सुपरभिजन समितिका सदस्य प्रमोद सिटौलाले जो जो व्यक्तिसँग त्यो डाटाको एक्सेस थियो त्यहीँबाट दुरूपयोग भएको हुनसक्ने अनुमान गरे । उनले यतिखेर त्यो डाटामा अध्यक्ष डा. पौडेल र निर्वाचन समितिको मात्र पहुँच रहेको र विगतमा भेरिफिकेसन, सुपरभिजन समितिका सबैको पहुँच रहेको जानकारी दिए ।
‘चाहने हो भने कस्ले दुरूपयोग गरेको छ भनेर छिनभरमै पत्ता लाग्छ, कसले कहाँबाट डाउनलोड गरेको रहेछ भनेर सिस्टममै देिखन्छ,‘ सिटैालाले हिमालयखबरसँग भने ।
सदस्यहरूको सूचि बाहिरिनु अपराध हो । जिपकोड सहितको ठेगाना, इमेल आइडी, फोन नम्बर समेत रहेको सदस्यहरूको गोप्य रहनुपर्ने विवरण बाहिरिएपछि अहिले एनअारएन अमेरिकामा अविश्वास पैदा भएको छ ।
यही सूचिको प्रयोग गर्दै उम्मेदवारहरूले भोट मागेको गुनासो बढ्दो छ । लुजियाना स्टेट युनिभर्सिटीमा पिएचडी अध्ययनरत सुनिल पौडेलले आफ्नो सेलफोनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार सञ्जय थापाको प्रचार प्रसार टेक्स मेसेज आएको जानकारी दिए । उनले थापा आफ्नो चिनजानको व्यक्ति पनि नभएको र कहिल्यै कल पनि नगरेकोले अाफ्नो विवरण कतैबाट दुरूपयोग भएको हुनसक्ने शंका गरे ।
‘यो राम्रो काम हुँदै होइन,‘ पौडेलले भने ।
::::: रेडियो अन्तरबार्ता :::::
अर्का सदस्य बद्री लामिछानेले पनि उम्मेदवारहरूको इमेल आइरहेको जानकारी दिए । ‘मसँग चिनजान नभएकाहरूको इमेलबाट प्रचार सामग्री, मतका लागि अनुरोध आइरहेको छ, सदस्य हुँदा मैले प्रयोग गरेको इमेल दुरूपयोग भएको छ,‘ उनले भने । उनले उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार बाला घिमिरेको इमेलबाट प्रचार सामग्री आइरहेको बताए ।
सदस्य हुने बेलामा एनआरएनका पदाधिकारीहरूले सदस्यहरूको विवरण सुरक्षित हुने प्रतिद्धता जनाएका थिए । तर अहिले त्यो विवरण छरपष्ट हुनुले एनआरएनको वर्तमान नेतृत्व कार्यकालको अन्तिम अवस्थामा थप विवादित देखिएको छ ।
एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष डा. केशब पौडेलले कुनै जिम्मेवारी समेत नदर्शाइ मिडियाको हातमा सूचि भए सार्वजनिक गरिदिन चुनौति दिए । ‘जहाँबाट त्यो डाटा आएको हो त्यो सार्वजनिक गरिदिनुस्, हामी कारवाही गर्छौ,‘ उनले भने । थपमा उनले संस्थाभित्र हुने सबै गलत कार्यको जिम्मेवारी आफूले वहन गरेता पनि त्यसलाई अब सच्याउन नसक्ने भन्दै पन्छिए ।
यही विषयमा हिमालयखबरले बिघटित भेरिफिकेसन समितिका एक जिम्मेवार पदाधिकारी रामकुमार सुवेदीसँग जिज्ञासा राख्यैाँ । उनले आफूलाइ यस बारेमा कुनै जानकारी नभएको जिकीर गरे । उनले भेरिफिकेसन समिति विघटन भएपछि कुनै पनि डाटामा एक्सेस नभएको उनको भनाइ थियो ।
९ हजार सदस्यहरूको विवरणलाइ सुरक्षित राख्न नसक्ने र उम्मेदवारहरूलाइ दिएर दुरूपयोग गर्नेमाथि कारवाहीको माग सदस्यहरूले गरेका छन् ।
टेक्ससको प्लानोमा बस्दै आएका बादल भुजेलले आफ्नो सबै विवरण बाहिरिएको विषयमा आपत्ति जनाए । ‘हामीले एनआरएनका पदाधिकारीलाइ विश्वास गरेर सबै व्यक्तिगत विवरण भरेका हौ, यसरी विवरण छरपष्ट हुनु अपराध हो । यसमा संलग्न जो सुकै भएपनि कारवाही हुनुपर्छ,‘ भुजेलले भने ।
डाटा लिकेज भएको चर्चा पछि यसलाइ एनआरएन क्षेत्रीय समितिले पनि गंभीरतापूर्वक लिएको छ । अमेरिकाज क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक गौरीराज जोशीले डाटा लिकेज हुनु खेदपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै आफूसम्म पनि डाटा आइपुगेको जानकारी दिए ।
यो डाटामा अध्यक्ष डा. केशव पौडेल, रामकुमार सुवेदी, बाल जोशी, पवन योञ्जन, डा. रुद्र अर्याल, शैलेश श्रेष्ठ र प्रमोद सिटौलाको मात्र पहुँच विगतमा थियो । अहिले निर्वाचन समितिको एक्सेस छ ।
यो डाटा कहाँबाट लिकेज भयो भन्ने विषयमा कसैले पनि जिम्मेवारी लिन चाहेननन् । डाटा लिकेज भएको स्विकार गरेपनि यात एकले अर्कालाई पन्छाउने प्रवृत्ति देखियो यात थाहा नभएको बताउनेहरू देखिए । यति ठूलो गंभीर घटना हुँदा पनि एनआरएन अमेरिका, क्षेत्रीय समिति र आइसिसीले अनुसन्धान गरेर दोषी पत्ता नलगाएमा त्यसले आगामी दिनमा झनै समस्या थप्नेमात्र नभएर सदस्य हुनेहरूको संख्या पनि क्रमशः घट्ने देखिएको छ ।
बाहिरिएका सदस्य विवरण:
दासढुंगामा मदन आश्रितको २६औँ स्मृतिसभा
२०७६ जेष्ठ ३, शुक्रबार ०७:२२
चितवन । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित चढेको जीप दुर्घटना भएको स्थल दासढुंगामा आज स्मृतिसभा आयोजना गरिएकोे छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले)का महासचिव भण्डारी र सङ्गठन विभाग ...
दुईहजार सदस्यताको स्विकृतीमा समितिले उठायो प्रश्न (भिडियो सहित)
२०७६ जेष्ठ ३, शुक्रबार २२:४८